शास्त्र भन्छ : महिलाले गर्नुहुदैन यी कार्य अनिष्ट हुन्छ ,कंगाल भइन्छ ! – Sandesh Press
May 23, 2021 484
एउटा राम्रो आचरण भएकी महिलाले घरलाई स्वर्गजस्तै बनाउन सक्छिन् । महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । भनिन्छ एउटा त्यतिबेला घर जस्तो बन्छ जतिबेला त्यस घरमा बस्ने महिलाले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर त्यसको पालन गर्छन् । हरेक धर्ममा महिलाहरुको स्थान माथि राखिएको हुन्छ । साथै महिलाको लागि कति काम यस्तो बताइएको छ कि जुन उनीहरुलाई गर्न इन्कार गरिएको छ ।घर छोडेर हिँड्नुहुँदैन : शास्त्रको अनुसार स्त्रीहरु कुनै पनि हालतमा आफ्नो
घर छोडेर हिड्नुहँदैन । अर्थात अर्काको घरमा बस्नुहुँदैन । यो कुरालाई नमान्दा धेरै नोक्सान हुन सक्ने बताइन्छ । नेपाली संस्कृतीमा जनई लगाउने परम्परा बैदिक कालदेखिनै चलिआएको छ । पुरुषको लागि जनई लगाउनु अनिवार्य मानिएको छ तर महिलाले जनई लगाएमा नराम्रो हुने मान्यता रहँदै आएको छ ।जप गर्नुहुँदैन : ओम मन्त्रको अभ्यास गर्दा कतिपय शारिरिक र मानसिक फाइदा हुने बताइन्छ तर यस्तो मानिदैँ आएको छ कि महिलाले कुनै पनि जप गर्नु नराम्रो मानिन्छ ।
इलाम – माई नगरपालिका–८ की २२ वर्षीया महिलालाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि परिवारले स्थानीय शुक्रबारे बजारको एक मेडिकलमा उपचार गराए। गर्भवती रहेकी उनको स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि परिवारले प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रमा उपचारका लागि लगे। त्यहाँ केन्द्र र माई अस्पतालका डा. रामकृष्ण आचार्य नेतृत्वको टोलीले ती महिलाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उपचारका लागि झापाको भद्रपुरस्थित मेची अस्पताल रिफर गरेको थियो।
परिवारले शुक्रबार बेलुकी ५ बजेको समयमा अस्पताल पुर्‍याए। करिब ५ घण्टा राख्दा पनि अस्पतालले उपचारको प्रक्रिया सुरु नगर्दा परिवारका सदस्यले उनलाई बिर्तामोडस्थित मेडिका अस्पताल ल्याए। मेडिकामा अक्सिजन लगाएर राखिएको थियो। ‘श्वास प्रश्वासमा समस्या आएकाले आइसियुको आवश्यकता थियो। तर, मेची अस्पतालमा आइसियको कुनै प्रबन्ध हुन सकेन।
अस्पतालले शनिबार बिदा भएकाले आइतबार मात्र बिरामीको चेक जाँच हुने भनेपछि उपचारको विकल्प खोज्दा मेडिका अस्पतालमा अक्सिजन उपलब्ध हुने भएपछि त्यही लग्यौं,’ बिरामीसंगै गएका स्थानीय पर्शुराम बाँस्तोलाले भने, ‘आइसियुमा राख्नका लागि बिएण्डसी अस्पतालमा सम्पर्क गर्दा सबै प्याक रहेछ। मनमोहनमा एउटा खाली रहेछ।
तर कोभिडको संक्रमण भनेपछि लिन मानेनन्। अक्सिजन दिएर नै सबैतिर सम्पर्क गर्दा दमकमा एउटा बेड त पाइयो। तर बिरामीलाई मेडिकाबाट एम्बुलेन्समा हाल्न नपाउँदै मृत्यु भयो।’ शनिबार बेलुकी करिब ५ बजे मृत्यु भएकी महिलाको शवलाई राति ८ बजेतिर घरमा ल्याइएको थियो। शव घरसम्म ल्याउन स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरिएको छैन। घरको सिकुवामा लाशलाई राखिएको परिवारको सदस्यहरु वरपर बसेका छन्।
‘ज्वरो आएको रहेछ केही दिन स्थानीय मेडिकलमा उपचारपछि नगर अस्पतालमा आएका थिइन्। एन्टिजेन टेस्ट गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि तत्काल थप उपचारको लागि मेची अस्पताल रिफर गरेका थियौं,’ नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पुष्कर कट्टेलले भने, ‘स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएकी उनलाई आइसियुमा उपचार गर्नुपर्ने भएकाले मेची रिफर गरिएको थियो तर उनीहरुले मेडिकामा राखेछन्।’
कोरोना संक्रमण देखिएको उनको अन्त्येष्टि कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल छ। परिवारका सदस्यहरुलाई छुट्टै स्थानमा राख्ने प्रबन्ध भइरहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कट्टेलले बताए। अहिले मृतक महिलाको उपचार गरिएको शुक्रबारेस्थित मेडिकल समेत सिल गरिएको छ। इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुबबहादुर खड्काले यसबारेमा जानकारी हालसम्म नआएको बताए।
मृत्यु भइसकेको हो भने परिवारको इच्छाअनुसार सदगत गर्न पाउँछन् तर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका इलामका १४ मध्ये ५ जना मात्रै सेनाले सदगत गरेको र बाँकी परिवारका सदस्यले नैस्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर नै सदगत गरेको प्रजिअ खड्काले बताए।
Prevधेरै प्रयास गर्दा-गर्दै पनि काठमाडौंमा देखियो यस्तो गम्भीर समस्या !
Nextहार्दिक श्रद्धाञ्जली! इलामकि कोरोना संक्रमित २२ वर्षीया महिलाको आइसियु नपाएरै गयो ज्यान!
आफ्नै दिदि भाई बीच घिनलाग्दो प्रेम बिवाह, जेल हाल्दिनुस भन्दै आमा रुँदै मिडियामा
बिहान ९ बजे देखि मध्यान्न १२ बजेसम्म जन्मिएका व्यक्तिहरु कति भाग्यमानी ! हेर्नुहोस् !
यी राशिका व्यक्तिले पाउँछन् सच्चा पार्टन्, जसले गर्छन् आफूभन्दा धेरै प्रेम पार्टनरलाई